'Sanduuqni Gurraachi' AirAisa galaana Jaavaa keessaa baafame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured ‘Sanduuqni Gurraachi’ AirAisa galaana Jaavaa keessaa baafame
‘Sanduuqni Gurraachi’ AirAisa galaana Jaavaa keessaa baafame
AirAsian lubbuu nama hedduu galaafachuu qofa hinturre kan angawootaa Indooneesiyaafi hawaasa guutuu addunyaa cinqaa ture. Achibuutee xayyaarichaati, keessattu ‘Sanduuqa Gurraacha’, kan hedduu yaachisaafi hirriba dhabsiisaa ture. Ammaa garuu, galanni kannii hojii xayyaara barbaachaa irratti boqannaa malee babba’anii turaniif, sanduuqni xayyaarichaa kuni iddoon inni itti dhidhime beekamuu qofa osoo hintaane, bishaan keessaa baafamee harka qorattootaa seeneera.
Hanga ammaatti qaama xayyaarichaa koolaafi eegee qofa kan argameefi bira gayame. Qaamni xayyaarichaa hidhaa oli; qoffee, sanduuqa lammataafi imaltoota teessoo isaanii irratti akka hidhamanitti hinhafne jedhamanii shakkaman dabalatee hanga ammaatti eessa akka jiru bira hingayamne, qubni itti hinakeekamne. Wonti qajeelatti beekame yoo jiraate xayyaarri AirAsia dhudhuma Galaana Jaavaa keessa jiraachuu isaati. Yaaliin qaama xayyaaraa isa hafe arguufi reeffa namootaa galaana keessaa guuruu akkuma itti fufetti jira. Mallattooleen hundi kan agarsiisan, barbaaddonni guyyaa guyyatti lafa xayyaarri soqamu dhiphisaafi bakka qaamni xayyaarichaa itti boqatetti kalaayaa jiraachuu isaaniiti.
Xayyaarri AirAsia jedhamu Sadaasa 28, 2014 Surabaayaa (Indooneesiyaa) irraa gara Singaappoor osoo deemuu ture kan qilleensa irraa Galaana Jaavaatti badee lubbuu imaltoota hundaa [namoota 162] galaafate. Sababni kufaatii xayyaarichaa qilleensa hamaa ta’uu hinoolu jedhamus, ammatti wonti mirkanaaye hinjiru.
Sanduuqni gurraachi ‘Black Box’ yeroo xayyaarri tokko balali’u odeffannoo heddu galmeessa. Sababa maaliif akka xayyaarri tokko garagale beekuuf odeffannoo sanduuqa kana keessa jiru dubbisuun dirqama. Kanaaf yeroo hunda yoo balaan xayyaaraa qaqqabu kan hundi barbachaa sanduuqa kanaa irratti bobba’uuf.
xayyaara airasia garagale
Previous articlePlaaneetiin ‘lakkuu ardii’ Kepler-438b jedhamtu argamte
Next articleJecha sijaaladha jedhutti dhimma osoo hinbaane ergaa jaalala dabarfachuun nidanda’ama